October 2016 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhagayso+Sawirro: Dayactir ballaaran oo ka socda wadooyinka magaalada Jilib.
Axmad	 Oct 30, 2016 0
Magaalada Jilib ee Wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa waxaa laga dareemayaa isbedel ballaaran oo dhan waliba la xiriira, iyadoona laga dareemayo magaalada horumur xoog leh. Dhawaaan Wariye Maxamed Muuday Abuu…
guuleed	 Oct 30, 2016 0
Dhuuxa Wareysiyada Waa Barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa Caawa Lagu soo qaatay qodobo Muhiim Ah. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa-wareysiyada-30-10-2016 FG-Wararka deg dega…
Warka Duhur waxaad kala degi kartaa linkiga Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka duhur-30-10-2016
Dagaalka Xalab oo wali socda iyo Mujaahidiinta oo horumaro soo hooynaya.
Iyadoo macrakada la doonayo in go’doonka looga qaado magaalada Xalab ay gashay maalinteedii sadexaad ayay Mujaahidintu soo hooynayaan guulo la taaban karo, iyadoona dagaallo kulul wali ay ka socdaan gudaha iyo daafaha magaalada.…
Dadka Ku Dhaqan Gobalada Waqooyi oo Ka Hadlay Ciidamada Ka Baxaya Wilaayaadka.(Maqal)
Ciidamada Itoobiya ayaa maalmihii dhaweyd ka baxay Magaalooyin dhaca koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Dadkii ka barakacay iyo kuwa ku haray Magaalooyinka ay ka baxeen Ciidamada Itoobiya ayaa si aad ah usoo dhaweeyay ciidamada Itoobiya…
Dhageyso:Khayraadka Soomaaliya oo Laga Sheekeeyay.
Cabdisalaam Maxamuud Cali oo ah indheer garad wax badan usoo joogay ayaa Wareysi siiyay idaacadda Alfurqaan. Waxa uu ka hadlay waxyaabo badan oo allaah uu ku manaystay Giyiga Soomaaliya. Shisheeyaha Soomaali kusoo duulay ayuu ku…
Si aad udhagaysato warka subax guji linkiga Hoose oo La deg warka oo dhameestiran. HALKAN KALA DEG WARKA SUBAX 30-10-2016
Dowladda Maraykanka oo ugu baaqday ehalada Shaqaalaheeda iney ka baxaan dalka Turkiga.
Iyadoo dowladda Maraykanka ay inbadan ku tacadisay xuquuqda Muslimiinta ayaa hadda waxay kaligeeda wajaheysaa dhibaatada uga timid dulmigii ay sanadihii lasoo dhaafay illaa iyo hadda ku hayso Muslimiinta, waxaana Muwaadinka Maraykanka…
guuleed	 Oct 29, 2016 0
Dhuuxa Wareysiyada Waa Barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa Caawa Lagu soo qaatay qodobo Muhiim Ah. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada-29-10-2016. FG-Wararka deg dega…
Warka Duhur waxa uu kamid yahay sadaxda war ee ka baxa idaacadda Alfurqaan waxaana Lagu soo Qaatay qodobo kala duwan ee kala deg qeybta Hoose. Halkan Kala Deg Warka Duhur-29-10-2016.